Dowladda Soomaaliya oo mar kale eedeyn u jeedisay Kenya
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa mar kale ku celiyey eedaynta ay dawlada federaalka Soomaaliya u jeedinayso dawladda Kenya ee ah faragelin arrimaha gudaha Soomaaliya.
Wasiirku waxa uu sheegay in Soomaaliya aan laga abaabulin dadka mucaaradka ku ah Kenya. Waxa uu sheegay in taas bedelkeeda Nairobi noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya, lagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in lagu carqaladeeyo dawladnimada dhismaysa ee Soomaaliya, sida uu wasiirku hadalka u dhigay.
Waxa uu mar kale ku celiyey oo uu difaacay go’aankii ay Soomaaliya ugu yeeratay safiiirka Nairobi, isla markaana ugu amartay safiirka Kenya inuu ku laabto dalkiisa si uu wadatashi ula soo sameeyo daawladdiisa.
Waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya u taagan tahay ilaalinta madaxbannaanida Soomaaliya
Kenya ayaa iyadu horey u beenisay inay faragelinayso Soomaaliya. War saxaafadeed kasoo baxay Kenya Talaadaii shalay ayaa lagu shegay inaysan weli Soomaaliya ka helin xiriir rasmi ah oo ku saabsan go’aanka la xiriira inay dalkiisa usoo dirtay safiirkii Kenya ee Muqdisho, Lucas Tumbo.
Dhinaca kalena musharrixiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go’aanka ay qaadatay dawladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. Musharrixiintu waxay shegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saamaynta taban ee xiriir xumida labada dal ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed.
Waxa goluhu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha in siyaasadda arimaha dibedda loo adeegsado olole doorasho, sida lagu sheegay war saxaafadeedka musharrixiinta.